ဟာသ Archives - Achawlaymyar
June 12, 2021 by Achawlaymyar
Zawgyi နိုင္ငံအလိုက္ရည္းစားထားျခင္းမ်ားကြာျခားပုံ စပိန္ ပထမေန႔ – ေခၚအိပ္ ဒုတိယေန႔ – ထပ္ၿပီး ေခၚအိပ္ ျပင္သစ္ ပထမေန႔ – ဘာဂါ တူတူစား၊ အနမ္းေတြ ဖလွယ္ ဒုတိယေန႔ – ေခၚအိပ္ တတိယေန႔ – ထပ္ၿပီး ေခၚအိပ္ အဂၤလိပ္ ပထမေန႔ – ဒင္နာ၊ ဝိုင္၊ အနမ္းေတြ ဖလွယ္ ဒုတိယေန႔ – အနမ္းေတြ ထပ္ဖလွယ္၊ ေပြ႕ဖက္ တတိယေန႔ – ေပြ႕ဖက္၊ အာဘြားရွလူး စတုတၳ ရက္ေန႔ – ေခၚအိပ္ၿပီးရင္း အိပ္ အေမရိကန္ ပထမေန႔ – ဒိတ္လုပ္.. ဘာညာ အကဲခတ္ ဒုတိယေန႔ – ေပြ႕ဖက္ တတိယေန႔ … Read more
June 9, 2021 by Achawlaymyar
ေကာင္မေလးကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္​ျငင္းဆုိ​ေနတာ​ေပါ့ ! ”ဦးရယ္ မျဖစ္နုိင္ပါဘူး ခုမီးက…ခေလးရွိေသးတယ္” ေဘာစိ ဦးေလးႀကီးလည္း” မီးကုိသာရမယ္ဆုိ ဘယ္ပုဒ္မေတြမဆုိ ေငြနဲ႕ေျဖရွင္း မည္ျဖစ္ေႀကာင္း ႏြားအုိ ျမက္နုႀကိဳက္တာ အစဥ္အလာျဖစ္ေႀကာင္း” ေျပာဆုိကာ ဒူးေထာက္၍ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္း​ေနျပန္​တယ္​ ! ေကာင္မေလးကလည္း “ငရဲေတြႀကီးပါ့မယ္ ဦးရယ္…မီးက တကယ္ ခေလးရွိပါေသးတယ္”ဆုိျပီးအႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆုိေနေတာ့… ေဘာစိဦးေလးႀကီးလည္း …“မီး​ေလး​ေရ …ေရွ႕ေရးစဥ္းစား​ေလ” ..ဆိုၿပီး အၿမဲ နားပူနားစာလုပ္​​ေနတယ္​ ! ေနာက္ဆုံးေတာ့ မီးဆုိတဲ႔ေကာင္မေလး လည္း ေဘာစိဦးေလးကုိ….မျငင္းသာ မလႈပ္သာပဲ လက္ထပ္ဖုိ႕သေဘာတူလိုက္တယ္ ! ေကာင္မေလးက..ဦးနဲ႕လက္ထပ္ျပီး ရြာကုိ ခဏ ဆုိျပီးျပန္သြားတာေပါ့ !ဦးလည္း လြမ္းကာက်န္ရစ္ခဲ႔တယ္​ ! နွစ္ရက္သုံးရက္ေနေတာ့ ေကာင္မေလး ဦးဆီကုိ ျပန္ေရာက္လာတယ္ ! ေကာင္မေလး(ေခၚ )မီးရဲ႕ ဘယ္ဘက္​လက္မွာ တစ္​နွစ္အရြယ္ ခေလး​ေလးတစ္ေယာက္ … Read more
ဟိုတယ္အခန္းထဲက လူငယ္စုံတြဲ တစ္ပတ္လုံး အျပင္မထြက္လာေတာ့လုိ႔ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ…
May 29, 2021 by Achawlaymyar
လူငယ္စုံတြဲ ဟိုတယ္ အခန္းထဲက တစ္ပတ္လုံး အျပင္မထြက္လို႔ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ… အဆင့္ျမင့္ ဟိုတယ္တစ္လုံး မွာ စုံတြဲတစ္တြဲ အခန္းငွားတည္းခိုခဲ့ၿပီး ၇ ရက္ တစ္ပတ္လုံးလုံး အခန္းထဲက ထြက္လာတာမေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ကပါ မသကၤာျဖစ္လာၿပီး အခန္းကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ၊အားလုံး အံ့အားသင့္ ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ ပစၥည္း ပို႔သမားေယာင္ေဆာင္ကာ အခန္းတံခါးကို သြားေခါက္ခဲ့ပါတယ္။ အခန္းတံခါး ဟ႐ုံေလးဖြင့္လာပါတယ္။တံခါးဟေနတဲ့ ၾကားကေန အခန္းထဲကို လွမ္းၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ထိတ္လန္႔အံ့အားသင့္စရာ ျမင္ကြင္းကို ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ ဟိုတယ္အခန္း ေနရာအႏွံ့မွာ စားႂကြင္း စားက်န္မ်ား အမွိုက္မ်ား ျပန္႔က်ဲၿပီး စည္းကမ္းမဲ့ ပစ္ထားတာေၾကာင့္ အနံ့ေတြက မေကာင္းေတာ့သလို အခန္းထဲက အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕လည္း ဖ်က္ဆီးခံထားရတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္က ခ်က္ျခင္း ရဲစခန္းကို ဖုန္ဆက္ … Read more
ယောကျာၤးလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်လားမချစ်လား စမ်းသပ်နည်းများ…
May 24, 2021 by Achawlaymyar
ရန္ကုန္-ျပည္- မႏၲေလး Express ကားေပၚမွာျဖစ္သည္ …(ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလ အန္တီရယ္)
May 18, 2021 by Achawlaymyar
ရန်ကုန်-ပြည်- မန္တလေး Express ကားပေါ်မှာဖြစ်သည် (ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ အန်တီရယ်) ကားပေါ်ရောက်ရင်အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် (၅၀) ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတယောက်ရန်ကုန်-ပြည်- မန္တလေး Express ကားပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ ကားပေါ်ရောက်ရင်အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် (၅၀) ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတယောက်မှယဉ်မောင်းအားကားစတင်ထွက်ချိန်တွင် အော်ပြောလေသည်။ ” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ရင်အဒေါ့်ကိုပြောပါကွယ်”” ဟုတ်ကဲ့ ဂျီးဒေါ်ရေ” ထိုသို့ဖြင့် ကားစီးလာရင်း အဒေါ်ကြီးမှာအိပ်ငိုက်ပါလာတော့သည် နာရီအနဲငယ်အကြာတွင်တော့အဒေါ်ကြီးအသံဟိန်းထွက်လာသည်” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ပြီလားကွဲ့” ယဉ်မောင်းရော စပါယ်ယာပါအခက်တွေ့ကုန်ကြလေသည် အုတ်ဖိုတာဆုံကိုအတော်လေးကျော်လွန်သွားတာကိုး အခြားခရီးသယ်များကလည်းဒရိုင်ဘာကိုဝိုင်းဝန်းအပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြတော့သည် ဒရိုင်ဘာလဲ မနေသာတော့ပဲ။ ” ကဲ ကဲကျနော့အပြစ်ပါဗျာ တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ကိုပြန်မောင်းပေးပါ့မယ် ဂျီးဒေါ်ရေ”ထို့နောက်ကားကို လေးဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်မောင်းခဲ့ရလေသည်။ ” ကဲ ဂျီးဒေါ်ရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ပါပြီဗျ ဆင်းလို့ရပါပြီ” အို ဆင်းမလို့မဟုတ်ပါဘူးငါ့တူရယ်ကားစထွက်တော့သမီးကမှာလိုက်လို့ပါ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ရင်နောက်ထပ်ဆေးတခွက်ထပ်သောက်ဖို့မမေ့နဲ့ဆိုလို့ပါကွယ်” ရယ်မောခြင်းဖြင့် ဘဝအမောတွေပြေပါစေ Ganabia #crd Unicode ရန္ကုန္-ျပည္- မႏၲေလး … Read more
လှိုင်သာယာ မီးခွက်စျေးနားတွင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ် လှိုင်သာယာ မီးခွက်စျေးနားတွင် ဘိုးတော်တစ်ယောက် ဗေဒင်ဟောနေတာကို ဘေးကလူငယ်အုပ်စု ၄/၅ယောက်က လှောင်သလိုလို ပြောင်သလိုလိုနဲ့ မျက်နှာပြောင်နေကြ လေသည် …။ ကြာလာတော့ဘိုးတော်လဲ ဒေါသတွေ ထွက်လာပြီး … `ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ငါကိုဘာထင်နေလဲ? ငါကျိန်စာတိုက် အင်းခွက်ရေးလိုက်ရင် …. မင်းတို့ဘဝတွေ ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ ?´´ အဲ့ဒါကို လူငယ်အုပ်စုက မကြောက်တဲ့အပြင် ခွက်ထိုးခွက်လန် ဟားတိုက်ရယ်မောပြီး လှောင်ပြောင်နေကြသေးသည် …။ ဒါပေမယ်… ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ သူတို့မျက်လုံးတွေ ဘာမှမမြင်ရတော့ပဲ တစ်လောကလုံးမှောင်မဲ သွားလေတော့သည် …။ အဲ့သည့်တော့မှသူတို့လဲ အသိတရားဝင်လာကြပြီး `အဖိုးရယ်သားတို့ မှားသွားပါတယ် ။ သားတို့ကိုခွင် လွှတ်ပေးပါ´´ လို့အော်ကြဒါပေါ့ အဲချိန်မှာ ဘိုးတော်ပြန်ပြော လိုက်တဲ့စကားက `မသာတွေငါဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူး ….။ … Read more
သမီးဖြစ်သူ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီးးးးး အမေဖြစ်သူက “သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ.. ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့လိုက်” ” ဟုတ် အမေ” နောက်ရက်ကျ သမီး ဆီကစာတစ်စောင် ဝင်လာတယ် “အမေ MAI-Yangon-Bangkok ပဲ” ဒဲ့ ။ အဲ့ဒါနဲ့အမေဖြစ်သူလည်း ဘာအဓိပ္ပါယ် ဆိုတာသိရအောင် MAI ရုံးကို ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်.. “MAI ရန်ကုန် ကနေ ဘန်ကောက်က လေယာဉ် အကြီးစားတွေ ဖြစ်ပြီး တစ်ရက် ၅ ကြောင်း ရှိပါတယ်။ တစ်ပါတ်မှာ ၇ ရက်လုံး နားရက် မရှိပါဖူး။ လေယဉ်တစ်ခါ ပြေးဆွဲချိန် ၄၅ မိနစ် ထိ ကြာပါတယ်။” လို့ MAI ရုံးဝန်ထမ်းက … Read more
May 8, 2021 by Achawlaymyar
ကျမ ဒီနေ့ နေ့ခင်း မြောက်ဥက္ကလာကနေ လှည်းတန်းသွားတော့ တက္ကစီငှားစီးသွားတယ်။ ကျမက ဖေ့စဖုတ် ကြည့်နေကျလူဆိုတော့ တက္ကစီကို သေချာရွေးပြီးငှားရတယ်။ ကားထဲမှာလူပိုပါသလား။ အဲကွန်းဖွင့်ထားသလားကြည့်ရတယ်။ ဆေးခပ်မှာကြောက်လို့။ အဲဒါနဲ့ ကားငှားတာ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ နောက်ဆုံး တက္ကစီတစ်စီးကျတော့မှ ကားသမားပုံစံကလည်း ရိုးသားတဲ့ပုံပေါ်တယ်။ အဲကွန်းလည်းဖွင့်မထားဘူး။ လူပိုလည်းမပါဘူး။ ပိုစိတ်ချရအောင် ထပ်မေးလိုက်သေးတယ်။ လူထပ်တင်မှာလား။ လမ်းမှာ အဲကွန်းဖွင့်မှာလား ဆိုတော့ လူထပ်မတင်ပါဘူး တဲ့။ အဲကွန်းကလည်း ပျက်နေတာ တဲ့။ ဖွင့်ချင်ရင်တောင်ဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့။ အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ သတိရလို့ ထပ်မေးကြည့်လိုက်တယ်။ ကားမောင်းနေတုန်း ဖုန်းမကိုင်ရဘူး။( ဘာညာဗီဒီယိုကားတွေ ဖုန်းနဲ့ဖွင့်ပြတာ ဖေ့စဖုတ်ထဲဖတ်ဖူးတယ်လေ) တစ်ထောင်ပိုပေးမယ် ဆိုတော့ သူက ထူးဆန်းသလိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး ဘာလို့လဲတဲ့။ ကျမက ဘာမှပြန်မပြောတော့ သူက ကောင်းပြီလေ တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကားနောက်ခန်းထဲ … Read more
May 7, 2021 by Achawlaymyar
ဒီည အားလား…ကျမ ဒီနေ့ စိတ်တွေ လွှတ်ပလိုက်တော့မယ် သေးထွက်အောင် ရီရမယ့် ဟာသ (၃) ပုဒ် ဒီည အားလား ? သူမ သည် ခေတ်ဆန်၏။ချော၏။လှ၏။ကိတ်၏။ ပုရိသ များအား ဖမ်းစားနိုင်သူဟု ဆိုနိုင်၏။ သူမ သည် ကျနော့် အိမ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်တွင် တစ်ကိုယ်တည်းနေသော အပျိုချော ဖြစ်၏။ တစ်နေ့ ညနေခင်းတွင် ကျနော် အိမ်ရှေ့ထိုင်ခုံ၌ ထိုင်နေတုန်း သူမ အိမ်ပြန်လာတာကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ ငေးကြည့်နေစဉ် ထူးထူးခြားခြား ကျနော် ထိုင်နေရာဆီကို တန်းတန်းမက်မက် လျှောက်လာနေတော့ ကျနော် အံ့သြနေရင်း… အနားရောက်တော့ သူမ က နူးညံတဲ့ အပြုံးတပွင့် ဖြင့် ကျနော့်ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ကျနော်လည်း ပျာပျာသလဲနှင့် မက်တပ် … Read more